Sharing For All: Gtalk အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၃)
mail အကောင့်ဟောင်းမှ သူငယ်ချင်းများကို အကောင့်သစ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းနည်း
မိသားစု ဝင်များ သူငယ်ချင်းများ ညီအကို မောင်နှမ များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ..
gmail အကောင့်ဟောင်းထဲမှ သူငယ်ချင်းတွေကို gmail အကောင့်သစ်အတွင်းသို့ ပြောင်းလဲချင်သူတွေအတွက် အကူအညီရလိုရငြား
ဘလော့ တင်လိုက်ပါတယ်..ဒါကို ညီလေး အူကြောင်ကြားက အကူအညီတောင်းလာလို့ ကျနော်လည်း သတိထားမိတာပါ..
အဲလိုပဲ အကောင့်တွေတော်တော်များများ သုံးနေကြသူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ် ထင်လို့ တင်လိုက်တာပါ..
မသိသေးသူများ အဆင်ပြေနိုင်စေဖို့..အောက်ပါ အဆင်တို့ ကို သေချာလေ့လာပါ...
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ gmail အကောင့်ဟောင်းကို အရင်ဝင်ပါ.. Contacts ကို ရွေးပေးပါ..
Contacts ကို ရွေးပြီးသွားရင် အောက်က ပုံမှာ More actions ကို နှိပ်ရပါမယ်..ထပ်မံပြီး Export ကို ရွေးပေးရပါမယ်.
Export ကို နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ google.com ကနေပြီး google download file(.csv) ကို ချပေးပါလိမ့်မယ်.
Export ကိုပဲ ထပ်မံနှိပ်လိုက်ပါ.
မိမိသုံးတဲ့ browser မှာ default save folder ( my docuemnts or downloader folder ) မှာ သိမ်းဆည်းပေးပါလိမ့်မယ်.
ပြီးသွားပါက မိမိပြောင်းလိုသော gmail အကောင့်သစ်ကို ဖွင့်ပါ..ကနဦးက စလုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်း Contacts ကို ရွေးပါ.
More actions ကိုသွားပါ. Import ကို ရွေးချယ်ပြီး နှိပ်ပါ..( Export အပေါ်မှာ ရှိပါတယ် )
စောစောက save ထားတဲ့ .csv file ကို ယူလိုက်ပါ..
အထက်ပါ ပုံတို့အတိုင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြင့် မိမိအကောင့်ဟောင်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို အကောင့်သစ်အတွင်းသို့
ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်..ဤပို့စ်ကို တင်ဖြစ်အောင် သတိဖေါ်ပေးသော ညီလေး အူကြောင်းကြား ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
လွယ်အိတ်ထဲမှ မသိသေးသော မိသားစုဝင်များ အဆင်ပြေကြပါစေ..
Gmail ထဲကနေ Video Chat ချက်မယ်...ရုပ်လဲကြည့်မယ် စကားလဲပြောမယ်
Gmail ထဲကနေ Video Chat လို့ရပါတယ်။ ဟိုဘက်ဒီဘက် အရုပ်လဲမြင်ရမယ်။ဖုန်းပြောသကဲ့
သာမန် Text chat သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ပထမဆုံး Video Chat အတွက် Plug in တစ်ခုကို ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်ရပါမယ်။
Plug in ကို Install လုပ်ရန် http://mail.google.com/videochat သို့သွားပါ။အောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။
ထို့နောက် Install voice and video chat ကို Click ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။
GoogleVoiceAndVideoSetUp ဖိုင်ကို သိမ်းလိုက်ပါ။
ထို့နောက် Double click ပြီး Install လိုက်ပါ။Restart browser now ကို Click ပေးပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော် လုပ်ကြည့်သလောက်တော့ တစ်ခါတလေ GoogleVoiceAndVideoSetUp ဖိုင်ကို သိမ်းခိုင်းပါတယ်..တစ်ခါတလေ
Install voice and video chat ကို Click လိုက်တာနဲ့ auto installလုပ်ပါတယ်)ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Restart browser nowရမှာပါ။အခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပါ။ restart ပြီးဆုံး ရင် voice and video chatကို Install လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးပါပြီ။
မိမိ Video Chat ပြောလိုသော တစ်ဖက်က သူသည်လည်း မိမိကဲ့သို့ပင် ကွန်ပျူတာတွင် Plug in ကို Install လုပ်ထားပြီးဖြစ်ရပါမယ်။
တစ်ဖက်ကသူသည် Plug in ကို Install လုပ်ထားပါက Gmail ထဲတွင် အစိမ်းရောင် video camera ပုံစံလေးဖြစ်နေပါမည်။
မလုပ်ထားပါက သာမန် အစိမ်းရောင် အစက်ကလေး ဖြစ်နေပါမည်။ (Only online)အောက်က ပုံအတိုင်းပါ။
Gmail chat ထဲမှ video chat လိုသော မိတ်ဆွေအမည်ပေါ်တွင် click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ထိုမိတ်ဆွေ အမည်နဲ့ pop-up window လေးတစ်ခုပွင့်လာပါမည်။
Pop-up window ထဲရှိ video and more ကို click ပါ။
ကျလာမည့် menu ထဲရှိ start video chat တွင် click နှိပ်ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။
ထို့သို့ခေါ်လိုက်လျှင် တဖက်မှာ ring မြည်သွားပြီး alert လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူတို့က မိမိအားခေါ်ဆိုခဲ့လျှင်လည်း
ထို alert မျိုးကို မိမိ ထံတွင်တွေ့ ရမှာပါ။ Answer ကို Click နှိပ်လက်ခံမယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ချိတ်ဆက်မိပြီးရုပ်မြင်အသံကြားဆက်သွယ်စကားပြောဆိုနိုင်ကြပါပြီ။တစ်ဖက်လူရဲ့ပုံကို fullscreen ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ထိုသို့ အသုံးပြုနေစဉ် Gtalk ကိုပိတ်ထားရင် အကောင်းဆုံးပါ၊ ဖွင့်ထားရင် ခေါ်လို့ မရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။)
Video chat က Gmail ထဲကပဲ ချက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆို VZO ကို သီးသန့် Install လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
web camera တော့ တပ်ဆင်ထားရမှာပါနော် နှစ်ယောက်လုံးပါ။သိတဲ့ လူတွေ သိပ် မများသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by Coralchitthu at 12:47 AM